तपाईको व्यवसायका लागि मोबाइल अनुप्रयोग र मोबाइल वेब प्लेटफर्मको सूची
म अझै पनि मोबाइल साइटमा अझै देख्न नसकिने साइटहरूको संख्याबाट आश्चर्यचकित छु - धेरै, धेरै ठूला प्रकाशकहरू सहित। गुगल अनुसन्धानले देखाईएको छ कि mobile०% व्यक्तिले वेबसाइट छोड्नेछ यदि यो मोबाइल मैत्री छैन भने। यो केवल केहि अतिरिक्त पाठकहरू प्राप्त गर्ने अवसर मात्र होईन, तपाईंको साइटलाई मोबाइल प्रयोगको लागि अनुकूलित गर्नु भएदेखि तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभव बढाउन सक्दछ चिन्छु मान्छेहरू हाल मोबाइल छन्! स्क्रीन र अपरेटिंग प्रणाली को विशाल विविधता संग, मोबाइल को लागी अनुकूलन अब केक को एक टुक्रा छैन, यद्यपि।
यहाँ तपाइँको साइट मोबाइल तयार बनाउन को लागी उपकरणहरु छन्।
एपिफायर - एपिफाईयरले iOS० सेकेन्ड मुनिको नेटिभ आईओएस, एन्ड्रोइड र विन्डोज अनुप्रयोगहरू बनाउँछ।
AppInst متبادل - व्यस्त सानो व्यवसाय मालिकहरूको लागि अनुप्रयोग निर्माता।
appery.io - दृश्य विकास उपकरणहरू, र एकीकृत ब्याकएन्ड सेवाहरूको साथ केवल क्लाउड-आधारित प्लेटफर्म
अनुप्रयोगहरू - AppsGeyser एक नि: शुल्क सेवा हो जसले तपाईंको सामग्रीलाई अनुप्रयोगमा रूपान्तरण गर्छ र तपाईंलाई पैसा दिन्छ।
Appy Pie - क्लाउड आधारित DIY मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर वा अनुप्रयोग निर्माण सफ्टवेयर जसले कुनै प्रोग्रामिंग सीप नभएका प्रयोगकर्ताहरूलाई विन्डोज Phone फोन, एन्ड्रोइड र आईफोन अनुप्रयोगहरू मोबाइल र स्मार्टफोनका लागि अनुप्रयोग सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ; र गुगल प्ले र आईट्यून्समा प्रकाशित गर्नुहोस्।
bMobilised - एक सरल, आधारभूत उपकरण जसले तपाईंको सामग्रीलाई स्वतः मोबाइल अनुकूलित साइटमा केही आधारभूत अनुकूलनको साथ रूपान्तरण गर्दछ।
बिजनेस अनुप्रयोगहरू - कुनै पनि व्यवसायको लागि आईफोन अनुप्रयोग सिर्जना गर्नका लागि द्रुत र सजिलो तरीका only $aमा मात्र!
बिल्डफायर - व्हाइटलेबलिंगको साथ शक्तिशाली अनुप्रयोग बिल्डर प्लेटफार्म।
कोडिका क्रस-प्लेटफर्म मोबाइल अनुप्रयोगहरू र वेबसाइटहरू सिर्जना गर्नका लागि एक शक्तिशाली ड्र्याग-ड्रप बिल्डर हो।
कोमो - कुनै पनि व्यवसायको लागि आफ्नै मोबाइल अनुप्रयोग सिर्जना गर्नुहोस्।
DudaMobile - मैले परीक्षण गरेका सबै उपकरणहरू मध्ये यो प्रयोग र कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको हुन सक्छ! तिनीहरूको आधारभूत विजार्डले तपाईंलाई केहि मिनेटमा मोबाइल साइट राख्न अनुमति दिन सक्दछ। उनीहरूले तपाईंलाई तिनीहरूका सबै विज्ञापनहरू हटाउन र केही थप पैसाहरूको लागि अनुकूलन डोमेन प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
फिड फ्लाइ - एजेन्सीहरूका लागि मोबाइल साइटहरू निर्माणमा उनीहरूको ग्राहकहरूको साथ काम गर्नको लागि सजिलो अनुकूलन मोबाइल वेबसाइट बिल्डर।
मोबिकानवास - एक निःशुल्क, ड्र्याग र ड्रप मोबाइल CMS विजेट एकीकरण र आधारभूत रिपोर्टिंग को साथ।
मोबिफाई - संसारभरका प्रकाशकहरू र वेब डिजाइनरहरू मोबिफाई स्टुडियोको प्रयोग सुन्दर मोबाइल वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न। मोबिफाईले वर्डप्रेस, ड्रुपल र अन्य सहित धेरै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको लागि मोबाइल साइटहरू प्रकाशित गरेको छ। मोबिफाईमा ई-कमर्स इञ्जिन पनि छ।
मोबाइल रोडी - ब्यान्ड, खेल हस्तियां र व्यवसाय को लागी सयौं कस्टम अनुप्रयोग बनाएको छ। तिनीहरूको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली अत्यधिक एकीकृत र परिष्कृत छ।
मोब्डिस - मोबाइल वेबसाइट बिल्डर। अब तपाईं हाम्रो उपकरणको साथ मोबाइल मार्केटि intoमा विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई सजिलै प्रभावशाली मोबाइल साइटहरू सिर्जना गर्न दिन्छ।
मोबाइल साइटलोर - तपाईको आफ्नै मोबाइल वेबसाइटइन मिनेटहरू बनाउनुहोस् जुन स्मार्ट फोनमा धनी देखिन्छ र कम अन्तमा फोनमा पनि सुन्दर
मोफ्यूज - एक मोबाइल सामग्री प्रबंधन प्रणाली हो कि एक भौगोलिक स्टोर लोकेटर एकीकृत गर्न सक्दछ। निर्माण गर्नुहोस्, सुरूवात गर्नुहोस्, नाप्नुहोस्, एकीकृत गर्नुहोस् र तपाईंको मोबाइल वेबसाइट प्रमोट गर्नुहोस्।
Moovweb - निःशुल्क विकासकर्ता उपकरणहरू र Tritium फ्रन्ट-एन्ड कोडको एक बिट प्रयोग गरेर, कुनै पनि अवस्थित वेबसाइटलाई एक महान मोबाइल अनुभवमा वास्तविक समयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणलाई उत्तरदायी डेलिभरी भनिन्छ, उत्तरदायी वेब डिजाइनको उद्यम एनालग।
मेरो मोबाइल फ्यानहरू - सस्तो मोबाइल अनुप्रयोगहरू र व्यक्तिगत, गैर-नाफामुखी र सानो व्यवसाय वातावरणको लागि हाम्रो उद्योग अग्रणी DIY अनुप्रयोग बिल्डर मार्फत मोबाइल वेबसाइटहरू।
नेटओब्जेक्ट मोज़ेक मोबाइल वेबसाइट डिजाइनको लागि एक अनलाइन अनुप्रयोग हो जुन ग्राफिकल संकेत प्रयोग गर्दछ प्रयोगको अतुलनीय सहजताको साथ सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न। मोज़ेक सुन्दर तरिकाले सरल बनाइएको छ, तर अन्तहीन शक्तिशाली छ, तपाईंलाई केही मिनेटमा प्रभावकारी मोबाइल वेबसाइटहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्न।
पेजपार्ट एक मिशन-संचालित संगठन हो जुन मोबाइल र सामाजिक उपकरणहरूको साथ बढेको र सफल हुनको लागि धेरै साना व्यवसाय (VSB's) को सशक्तिकरणमा केन्द्रित छ।
स्नाप्पी नेटिभ आईप्याड, आईफोन र एन्ड्रोइड कस्टम मोबाइल एप्लिकेसनहरू छिटो बनाउँदछ जुन उद्योग विशेष हो र कुनै विकासको आवश्यकता पर्दैन।
The AppBuilder - अनुप्रयोगहरूको साथ तपाईंको व्यवसाय पुनःर्भेन्ट गर्नुहोस्। उद्यम र सरकारी ग्रेड अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन कर्मचारीहरू, साझेदारहरू र ग्राहकहरूलाई खुशी पार्दछन्।
ViziApps - तपाईको नेटिभ अनुप्रयोग डिजाइन गर्नुहोस् र कोड डाटा बिना तपाईको डेटा प्रबन्ध गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईको उपकरणमा तुरून्त यसलाई चलाउनुहोस्।
टैग: अनुप्रयोगअनुप्रयोग निर्माताएपिफायरappinst متبادلappsgeyserappy पाईbizness अनुप्रयोगहरूबिल्डफायरकोडिकाकोमोमोबाइल अनुप्रयोगमोबाइल अनुप्रयोग निर्मातामोबाइल अनुप्रयोग इञ्जिनमोबाइल अनुप्रयोग निर्मातामोबाइल अनुकूलमोबाइल अनुकूलनमोबाइल साइटहरूmoovwebमेरो मोबाइल फ्यानहरूस्न्याप्पीएप्प बिल्डर
M गल्तिहरू तपाईंले मार्केटि Per प्रदर्शनमा बनाउनुहुनेछ
Allocadia: बनाउनुहोस्, ट्र्याक गर्नुहोस्, र ग्रेटर आत्मविश्वास र नियन्त्रणको साथ तपाईंको मार्केटिंग योजनाहरू नाप्नुहोस्
डा। थॉमस हो
सेप्टेम्बर 10, 2011 बेलुका 2:05 बजे
'बेयर बोन्स' को लागि तर प्रयोग गर्न सजिलो, मलाई WinkSite मन पर्छ जुन मैले मेरो मोबाइल उपकरणहरूमा मेरो सुरु पृष्ठको लागि प्रयोग गर्छु।
यसको साथी साइट http://Delivr.com QR कोडहरू र तिनीहरूको विश्लेषणहरू सिर्जना गर्नका लागि उत्कृष्ट छ।
सेप्टेम्बर 10, 2011 बेलुका 3:05 बजे
Winksite मोबाइल प्रयोगको लागि तपाईंको साइटलाई रूपान्तरण वा एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने उपकरण भन्दा मोबाइल साइटको रूपमा देखा पर्‍यो... के म त्यहाँ गलत छु?
सेप्टेम्बर 11, 2011 मा 12: 33 AM
होईन, विन्कसाइटले साइट सिर्जना गर्दछ जुन तपाईंलाई नेभिगेट गर्न सक्षम गर्दछ (पहिले नै) मोबाइल-मैत्री सामग्री (साथै आरएसएस फिडहरू)
सेप्टेम्बर 12, 2011 बेलुका 9:57 बजे
चिसो सामान। महान उपकरण डग।
यो दोस्रो पटक हो जुन मैले गत हप्ता वा सो भन्दा बढी फिडलफ्लाइ देखेको छु। मैले यी मध्ये केही उपकरणहरू प्रयास गरेको छु (त्यहाँ धेरै छन् भनेर पनि थाहा थिएन) र केवल तपाईं र तपाईंका पाठकहरूसँग साझेदारी गर्न, FiddleFly ROCKS!! म मिनेटमा अनुकूलन डिजाइन साइटहरू निर्माण गर्न सक्छु। ठीक छ, त्यसैले म यी केटाहरूको लागि काम गर्छु जस्तो आवाज सुरु गर्नु अघि (यो ढिलो हुन सक्छ) म सुझाव दिन्छु कि तपाइँका पाठकहरूलाई अन्तिम निर्णय गर्नु अघि धेरै समाधानहरू प्रयास गर्नुहोस्।
महान पोस्ट को लागी फेरि धन्यवाद
सेप्टेम्बर 12, 2011 बेलुका 9:58 बजे
सेप्टेम्बर 13, 2011 मा 3: 35 AM
कस्तो छ http://mobdis.com? html5 मोबाइल साइट र विज्ञापन निर्माणकर्ता।
सेप्टेम्बर 7, 2013 मा 10: 44 AM
थपियो, ढिलाइको लागि माफ गर्नुहोस्!
सेप्टेम्बर 13, 2011 मा 8: 30 AM
मैले वास्तवमा यी उपकरणहरूको एक जोडी प्रयोग गरेको छु र मेरो अलिकति सुधार गर्न पनि व्यवस्थित गरेको छु अनलाइन प्रतिष्ठा प्रक्रियामा। वास्तवमा यो केहि सजिलो छैन तर यो सम्भव छ र यो सबै कुरा हो।
सेप्टेम्बर 2, 2014 बेलुका 4:35 बजे
के तपाइँ moovweb लाई तपाइँको सूचीमा फिट हुने विकल्पको रूपमा विचार गर्नुहुन्छ, यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने थप गर्नुहोस्।